Mogadishu Journal » Obama oo cafiskii ugu ballaarnaa u fidiyay maxaabiis
Mjournal :–Muddo 100 Sano ah oo ka soo wareegtay kadib, wuxuu Madaxweynaha Mareykanka barack obama cafiskii ugu dheeraa u fidiyay 240 Maxbuus oo 67 ka mid ah ay ku xunaayeen xabsi da’im, kuna jiray jeelasha dalka Mareykanka.
Cafiskan ayaa ah, kii ugu weynaa ee Madaxweyne Mareykan ah ka soo saaro Aqalka cad, waqiti haatan laga joogo 100 sano.
Tirada Maxaabiista uu Madaxweyne Obama cafiska u fidiyay mudadii 8-da sano aheyd ee uu xilka hayay waxa ay gaarayaan 562 maxbuus oo dembiyo kala duwan ku eedaysanaa.
Qaraar ka soo baxay aqalka cad ee Mareeykanka, ayaa lagu shaaciyay Cafiska uu Madaxweyne barack obama u fidiyay maxabiistaasi, waxaana qaraarka lagu xusay in maxaabiistaasi si rasmi ah loo sii deyn doono bisha Dichenber ee Sanadkan.
Boko Haram oo hogaamiye cusub yeeshay